बाल्यकालदेखि नै अभिनेत्री प्रियंका छिन् यो रोगबाट पिडित ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / बाल्यकालदेखि नै अभिनेत्री प्रियंका छिन् यो रोगबाट पिडित !
admin December 1, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 163 Views
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चौपडा दमको रोगी रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकी गायक निक जोनससँग विबाह गरेकी प्रियंका दमको रोगी रहेको खुलेको हो । पाँच वर्षको उमेरदेखि उनलाई दमको रोग रहेको छ ।
यस रोगको खुलासा प्रियंका स्वयमले गरेकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत उनले आफूलाई पाँच वर्षको उमेरदेखि दम रोग लागेको खुलासा गरेकी हुन् । उनले भनेकी छिन, ‘दम एक रोग हो, यसलाई लुकाएर राख्नु आवश्यक छैन ।’
सोही क्रममा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा प्रियंकाले भनेकी छन्, ‘म पाँच वर्षको उमेरदेखि दम रोगबाट पीडित छु । मेरी आमाले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो ।पहिले मलाई मानिसहरुले धेरै औषधी सेवन गर्नुहुँदैन, पछि औषधी खाने बानी बस्छ भन्थे । त्यसपछि मैले औषधि लिन बन्द गरें र इन्हेलर प्रयोग गर्न थालें ।’ यसैबीच प्रियंकाकी प्रेमी निक जोनस पनि मधुमेहका रोगी रहेका हुन् ।
अन्य समाचार : मलेसिया रोजगारीको बाटो खुल्यो, लागेन शून्य लागतको टुंगो नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसियाको रोजगारीको बाटो खुला भएको छ।
यसबारे कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए।
२०७५ कात्तिक १२ गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम. कुलासेगरानबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जान पाउने गरी श्रम समझदारी पत्र(एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन।
Previous कठै मान्छेको भाग्य ! अहिलेसम्म २५ जनासंग विवाह गरे तर म र्ने बेलामा यी बुबा एक्लै छन् (भिडियो हेर्नुस्)
Next डिएसपीको ‘युनिफर्म’ लगाएर टिकटकमा भिडियो हाल्ने यी को हुन् ?